नेपाल आज | कसरी जन्मियो सिलाई मेशिन ?
आइतबार, ०१ भदौ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
सन् १८४१ को सन्दर्भ हो । फ्रान्सेली सेनाको बर्दी सिउन ८० वटा सिलाई मेशिनमा काम भइरहेको थियो । यो मेशिनमा एक मिनेटमा २ सय टाँक मार्न सकिन्थ्यो । जबकी हातबाट मुश्किलले ३० वटा मात्र सम्भव हुन्थ्यो । यी मेशिनमा भइरहेका कामको अनुगमन बार्थीलेमी थिमोनियर नामको सूचिकारले गथ्र्यो । उ नै ती मेशिनको निर्माता थियो । अरु सूचिकारलाई थिमोनियरको सफलता बिझायो । मेशिनले नै सवै काम गर्ने हो भने कालिगढको के काम ? उनीहरु आफ्नो रोजीरोटी खोसिनेमा आतंकित भए । एकदिन सबै सूचिकार मिलेर थिमोनियरको पसलमा आक्रमण गरेर सबै मेशिन ध्वस्त बनाइदिए । थिमोनियर एउटा मेशिन लिएर ज्यान जोगाउँदै त्यहाँबाट भाग्यो । त्यसपछि गाउँमै बसेर आफ्नो कर्म अघि बढाउने निर्णय गर्यो ।
बाटामा बसेर आफूले आविष्कार गरेको मेशिन देखाएर थोरै पैसाबाट जीविका गथ्र्यो । अबका दिन उसका लागि कठिन बन्दै गए । काठका मेशिन बनाएर उ दुई डलरमा विक्री गथ्र्यो । स्न १८४५ तिर म्याग्निन नामका एक व्यापारीले थिमोनियरलाई धातुको मेशिन बनाएर बेच्ने सुझाव दियो । सल्लाह सकारात्मक मान्दै उसले धातुका मेशिन बनाउन थाल्यो । बजारमा अचम्मैसंग मेशिनको माग हुन थाल्यो । उसले सोच्यो– अब मेरा दिन फर्किए । तर फेरि एकपटक थिमोनियरले मानसिक पीडा खेप्नु पर्यो । कारण के थियो भने मानिस र मेशिनबीच भएको प्रतिस्पर्धामा मेशिनको हार भयो ।
यसैबीच अर्को के भयो भने इलियास होवी भन्ने मानिस पनि सिलाई मेशिन बनाउने काममा लागिरहेको थियो । इलियास पत्नीले सिलाई गरिरहेको बखत ध्यानपूर्वक हेथ्र्यो र औंला चलाउने तरिकामा राम्ररी विचार पुर्याउँथ्यो । सन् १८४६ मा उसले एउटा सिलाई मेशिन बनायो र त्यसको वैधानिक अधिकार पनि लियो । तर महँगो भएका कारण बजारमा खपत भएन । इलियासले हार मानेर आफ्नो पेटेन्ट राईट थोमस नाम गरेको एकजना व्यापारीलाई बेचिदियो ।
पहिलो व्यावहारिक सिलाई मेशिन आइजक मेरिट सिंगरले सन् १८५० मा बनाउका थिए । यसले बडो जतनसाथ एकै सरल रेखामा टाँका हाल्ने गथ्र्यो । इलियासले यस मेशिनका बारे थाहा पाए । उसलाई के लाग्यो भने यो उसकै सिको गरेर बनाइएको हो । उसले सिंगरमाथि २५ हजार डलर हर्जनाको मुद्दा ठोक्यो । यतिबेलासम्म अरु निर्माताले पनि मेशिन बनाउन शुरु गरिसकेका थिए ।
इलियासले सवै निर्माता माथि हर्जना मुद्दा हालिदियो । पछि पछि त प्रतिस्पर्धीहरुबीच एकअर्कालाई मुद्दा हाल्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । वस्तुको आविष्कार इतिहासमा यति विधि मुद्दा सम्भवत : सिलाई मेशिनले नै खेपेको हुनुपर्छ । जुन अद्यापि सिलाई मेशिन युद्ध नामले प्रसिद्ध छ । यस युद्धले कुनै समाधान ननिकालेपछि सबै मिलेर निष्कर्ष स्वरुप एउटा पेटेन्ट पूल बनाए । एक अर्काको विचार तथा पेटेन्ट फीमा साझेदारी गरे । अब इलियासको गरिबी अन्त्य भयो ।
सन् १८५६ मा सिंगरले सिलाई मेशिन बेच्न शुरु गर्यो । यसको मूल्य १ सय २५ डलर कायम गरियो । तर त्यतिबेलाको बजार हेर्दा यो मूल्य अत्यन्तै महँगो सावित भयो । यो समस्या हल गर्न सिंगरको साझेदारी र वकिल एडवर्ड क्लार्कले किस्तावन्दीमा मेशिन बेच्ने सल्लाह दियो । संसारमा पहिलोपल्ट सिलाई मेशिन किस्तामा बेचियो । क्लार्कको जुक्तिले अचूक काम गर्यो । घरघरमा सिंगरको सिलाई मेशिन पुग्न थाल्यो । यो नै विश्वको सर्वाधिक ठूलो सिलाई मेशिन हो । यसले आज पनि किस्तामा मेशिन बेच्न छोडेको छैन् ।
सिलाई मेशिन पेटेन्ट राईट